Na-enye ndị ọzọ LED Street Light, LED Street Light, Street okporo ụzọ, Street Light LED Site China emeputa
Nkọwa:Uzo Ozo di ndu,Uhie okporo ụzọ ọkụ,Mgbawa Street,Street Light ikanam,,
Home > Ngwaahịa > Uhie okporo ụzọ ọkụ > 2017 LED Street Light
Ngwaahịa nke 2017 LED Street Light , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Uzo Ozo di ndu , Uhie okporo ụzọ ọkụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Mgbawa Street R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Egwuru elu nke ọkụ na-eme ka ọkụ ọkụ n'okporo ámá maka ire ere  Kpọtụrụ ugbu a
Ebube n'èzí n'èzí n'èzí na akwụkwọ afọ 5  Kpọtụrụ ugbu a
30w 100-110lm / w ada ìhè n'okporo ámá  Kpọtụrụ ugbu a
60W Philips 3030 LED Street Light  Kpọtụrụ ugbu a
70W Racquet Mpempe akwụkwọ LED Street Light  Kpọtụrụ ugbu a
Ụzọ okporo ụzọ 150W LED Street maka Projects  Kpọtụrụ ugbu a
AC 110V 220V Module 120W LED Street Lighting  Kpọtụrụ ugbu a
IP65 90W Light Street Light na Ce & RoHS  Kpọtụrụ ugbu a
Na-acha ọkụ White 40W Ọkụ Ụzọ Ntanụ LED na Ce & RoHS  Kpọtụrụ ugbu a
2018 New 300W LED Street Lamp na Ce & RoHS  Kpọtụrụ ugbu a
Ụzọ Bright Bright Street 2700K-6500K 250W LED Street Lighting  Kpọtụrụ ugbu a
Ụzọ okporo ụzọ nke 200W LED Street Light of Projects  Kpọtụrụ ugbu a
AC 220V 150W Ọwara okporo ụzọ n'okporo ámá LED High Way  Kpọtụrụ ugbu a
White White 100W LED Street Lighting na Ce & RoHS  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuru elu nke ọkụ na-eme ka ọkụ ọkụ n'okporo ámá maka ire ere
Nkọwapụta ngwaahịa: Egwuru elu nke ọkụ na-eme ka ọkụ ọkụ n'okporo ámá maka ire ere Model NO.AD-LD-DM60W Nominal Power46 60W Voltage AC 85-265V Certificate CE, RoHs Frequency Range 50Hz-60Hz Light Qty 3030 54 PCS Life Time 50000 Hours Storage...
Ebube n'èzí n'èzí n'èzí na akwụkwọ afọ 5
Ọnụahịa otu: USD 49.87 - 51.04 / Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa: Ebube n'èzí n'èzí n'èzí na akwụkwọ afọ 5 Nkọwapụta ngwaahịa: Model NO.AD-LD-DM40W Nominal Power4 40W Voltage AC 85-265V Certificate CE, RoHs Frequency Range 50Hz-60Hz Light Qty 3030 36 PCS Life Time 50000 Hours...
30w 100-110lm / w ada ìhè n'okporo ámá
Ọnụahịa otu: USD 47.63 - 48.75 / Piece/Pieces
Nkọwapụta ngwaahịa: 30w 100-110lm / w ada ìhè n'okporo ámá Nkọwapụta ngwaahịa: Model NO.AD-LD-DM30W Nominal Power4 30W Voltage AC 85-265V Certificate CE, RoHs Frequency Range 50Hz-60Hz Light Qty 3030 24 PCS Life Time 50000 Hours Storage...
Ọnụahịa otu: USD 25.26 / Piece/Pieces
60W Philips 3030 LED Street Light Nkọwa: 60W Philips 3030 LED Street Light. nwere ike dochie oriọna na-enweghị ike, oriọna ọkụ ọkụ, oriọna electrodeless, oriọna mercury, oriọna sodium n'enweghị mkpa iji dochie akara mbụ ahụ. A pplied na obodo...
70W Racquet Mpempe akwụkwọ LED Street Light
Ọnụahịa otu: USD 53.56 - 54.83 / Piece/Pieces
70W Racquet Mpempe akwụkwọ LED Street Light High Power COB Tennis raket LED Street Light using high quality aluminum house, mma na okpomọkụ dissipation na, hụ na isi iyi na-adị ndụ. Ejiri igwe anaghị agba nchara ịghasa, oriọna dịgidere. Ejiri...
Ụzọ okporo ụzọ 150W LED Street maka Projects
Ọnụahịa otu: USD 75.52 - 77.3 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 65 * 25 * 13cm, 1 PCS / CTN
Okporo Ụzọ Ụzọ Ọpụpụ Na-adịghị Anya 150W Ọnụ Ụzọ Ámá Mmiri Uhie Maka Ihe Ndị Nzube Nkọwa: 2018 ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ 30W 40W 60W 90W 120W 150W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike...
Ọnụahịa otu: USD 66.64 - 68.22 / Piece/Pieces
IP65 AC 110V 220V Module 120W LED Street Lighting Nkọwa: 2018 ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ 30W 40W 60W 90W 120W 150W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ nwere ike...
IP65 90W Light Street Light na Ce & RoHS
Ọnụahịa otu: USD 58.6 - 59.99 / Piece/Pieces
IP65 AC 220V 90W LED Street Light na Ce & RoHS Nkọwa: 2018 ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ 30W 40W 60W 90W 120W 150W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ nwere...
Na-acha ọkụ White 40W Ọkụ Ụzọ Ntanụ LED na Ce & RoHS
Ọnụahịa otu: USD 25.43 - 26.03 / Piece/Pieces
Na-acha ọkụ White 40W Ọkụ Ụzọ Ntanụ LED na Ce & RoHS Nkọwa: 2018 ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ 30W 40W 60W 90W 120W 150W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ...
Ọnụahịa otu: USD 133.04 / Piece/Pieces
2018 New 300W LED Street Lamp na Ce & RoHS Nkọwa: 2018 ihe kachasị ọhụrụ 50W 100W 150W 200W 250W 300W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ nwere ike ịhụ....
Ụzọ Bright Bright Street 2700K-6500K 250W LED Street Lighting
Ọnụahịa otu: USD 90.99 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 630 * 300 * 145MM, 1 PCS / CTN
Ụzọ Bright Bright Street 2700K-6500K 250W LED Street Lighting Nkọwa: 2018 ihe kachasị ọhụrụ 50W 100W 150W 200W 250W 300W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ...
Ụzọ okporo ụzọ nke 200W LED Street Light of Projects
Ọnụahịa otu: USD 80.72 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 540 * 300 * 145MM, 1 PCS / CTN
Ụzọ okporo ụzọ nke 200W LED Street Light of Projects Nkọwa: 2018 ihe kachasị ọhụrụ 50W 100W 150W 200W 250W 300W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ nwere ike...
AC 220V 150W Ọwara okporo ụzọ n'okporo ámá LED High Way
Ọnụahịa otu: USD 65.9 / Piece/Pieces
Nkwakọ ngwaahịa: 450 * 300 * 145MM, 1 PCS / CTN
AC 220V 150W Ọwara okporo ụzọ n'okporo ámá LED High Way Nkọwa: 2018 ihe kachasị ọhụrụ 50W 100W 150W 200W 250W 300W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ...
White White 100W LED Street Lighting na Ce & RoHS
Ọnụahịa otu: USD 55.42 / Piece/Pieces
White White 100W LED Street Lighting na Ce & RoHS Nkọwa: 2018 ihe kachasị ọhụrụ 50W 100W 150W 200W 250W 300W LED Street Light. O nwere oghere dị ọkụ ma dị mfe nke ụlọ Aluminom. IES na-aga n'ihu, ọ nwere ikike siri ike, nke ndị mmadụ nwere...
China 2017 LED Street Light Ngwa
Anyị so n'etiti ndị na-emepụta ihe ndị a ma ama na ndị na-enye ụdị mbara igwe dị iche iche nke anyanwụ dị iche iche dị iche iche dị iche iche, gụnyere sodium vapors, LED's na CFL. Ọkụ anyị nwere ike ịrụ ọrụ n'ụzọ dị nro na njiri. Ngwa ndị a na-eguzogide ọgwụ ọjọọ na ọnọdụ ihu igwe kachasị mkpa. anyị nwere ike ịhazi ụdị ngwaahịa anyị niile dị ka ndị ahịa dị ka ndị ahịa chọrọ. Nnyocha a na-anwale, N'ikwekọ n'ụkpụrụ ahịa nke mba ụwa, Ụdị ndị a pụrụ ime.
Uzo Ozo di ndu Uhie okporo ụzọ ọkụ Mgbawa Street Street Light ikanam Uzo Ohu Uhie